Nin Yuhuuda oo lagu dilay toogasho ka dhacday Daanta Galbeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldNin Yuhuuda oo lagu dilay toogasho ka dhacday Daanta Galbeed
July 1, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Gaariga oo wadada ka baxay burburayna weerarka kadib. Sawirka: AFP.
Nin Yuhuud ah ayaa la dilay xaaskiisa iyo labo caruur ah oo uu dhalay ayaa la dhaawacay kadib markii gaarigooda rasaas lagu qabadsiiyay Daanta Galbeed, sida ay sheegeen militariga.
Ninka ayaa dhintay markii gaariga uu burburay kadib weerarka meel u dhow deegaanka Yuhuuda ee Otniel.
Ciidamada Yuhuuda ayaa raadinaya dablaydii Falastiiniyiinta ahayd ee weerarka geystay.
Waa weerarkii labaad oo loo geysto Yuhuuda oo ka dhaca Daanta Galbeed labo bari gudahood. Maalintii Khamiista ahayd ayaa gabar 13-sanno jir ah lagu dilay qolkeeda hurdada.
Warbaahinta maxaliga ah ee Yuhuuda ayaa ninka dhintay ku sheegtay magaciisa Michael Miki Mark oo 48-sanno jir ah.
Xaaskii iyo labo caruur oo dhaawac ah ayaa la dhigay isbitaal si loogu daaweeyo.
March 15, 2019 Afartan iyo sagaal qof oolagu dilay toogasho ka dhacday labo masaajid oo kuyaala dalka New Zealand
September 24, 2016 Nin qori ku hubaysan oo afar qof toogasho ku dilay xarun dukumaaysi oo kutaala magaalada Seattle ee Maraykanka
October 21, 2016 Koonfur Afrika oo doonaysa in ay ka baxdo Maxkamada Dambiyada Caalamiga ah
July 22, 2016 Booliiska Kenya oo dilay labo xubnood oo al-Shabaab looga shaki qabo
Six killed in attack in Kenya; al Shabaab claims responsibility
Baydhabo-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada federaalka Soomaaliya qaybteeda magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa maanta go’aan ka gaartay afar xubnood oo lagu eedeeyay in ay katirsanyihiin kooxda ISIS, kuwaasoo lagu qabtay dhawaan [...]